Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » IJapan ngoku ivaliwe kubo bonke ngaphandle kwabemi
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • I-Israel Iphula Iindaba • Iindaba zaseJapan eziQhekezayo • iindaba • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Ukuqala ukusebenza ngoLwesibini, nge-30 kaNovemba, 2021, iNkulumbuso yaseJapan uFumio Kishida ubhengeze ukuba imida yayo ivaliwe kubo bonke abantu basemzini ukuphendula Omicron COVID-19 eyahlukileyo.
Abemi baseJapan ababuyela elizweni bevela kuhambo kuya kufuneka bahlaliswe bodwa kwiindawo ezimiselwe ngurhulumente. Abantu basemzini abaphethe ii-visa zangoku zokuhlala nabo baya kuvunyelwa ukuba babuyele elizweni, njengoko kuya kuba njalo kwabanye abahambi bezozakuzo kunye namatyala oluntu.
Nangona kungekabikho usulelo lwe-Omicron oluxeliweyo okwangoku eJapan, i-PM ithe, "Sithatha inyathelo) ngeemvakalelo ezinamandla zengxaki, yongeza, "La ngamanyathelo okwethutyana, akhethekileyo esiwathathayo ngenxa yokhuseleko kude kucace ngakumbi. ulwazi malunga nokwahluka kwe-Omicron.
IJapan ilandela i-Israel njengekuphela kwamazwe ama-2 ukuvala imida yawo ngokupheleleyo. NgoMgqibelo, u-Israyeli wathi uzakuvala ukungena kwabo bonke abantu basemzini kweli lizwe, elenza ilizwe lokuqala ukuvala imida yalo ngokupheleleyo ukuphendula i-Omicron. Inkulumbuso yakwa-Israel uNaftali Bennett uthe ukuvalwa, kulinde ukuvunywa kukarhulumente, kuya kuhlala iintsuku ezili-14 kwaye ilizwe liza kusebenzisa itekhnoloji yokujonga umnxeba wokulwa nobunqolobi ukuze kuqulathe ukusasazeka kweOmicron.
I-Omicron ibhalwe “njengenye yenkxalabo” nguMbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO). Ngokwewebhusayithi ye-WHO, ukwahluka kwe-Omicron kunenani elikhulu lotshintsho, ezinye zazo ziphathelene. Ubungqina bokuqala bucebisa ukonyuka komngcipheko wokosuleleka kwakhona ngolu hlobo, xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zenkxalabo. Inani lezehlo ze-Omicron libonakala likhula phantse kuwo onke amaphondo aseMzantsi Afrika.
Izinga lokugonya laseJapan lelona liphezulu kuqoqosho lwe-G7, oluquka iCanada, iFransi, iJamani, i-Itali, iJapan, i-UK, i-US kunye ne-European Union. Usulelo lwe-COVID-19 lwehle kakhulu ukusukela oko kwafikelela kumaza esihlanu ngo-Agasti.
Ekhetha ukwenza impazamo kwicala lokulumkisa abemi baseJapan, iNkulumbuso uKishida uthe, "Ndikulungele ukuthwala konke ukugxekwa kwabo bathi ulawulo lweKishida lulumke kakhulu."